Imithetho emisha ye-FAA drone isebenza namuhla
Ikhaya » Izindaba Zamuva » zezindiza » Imithetho emisha ye-FAA drone isebenza namuhla
zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Inkulumo Yezokuvakasha • Transportation • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
Imithetho emisha iyisinyathelo sokuqala esibalulekile ekuphatheni ngokuphepha nangokuphepha ukusetshenziswa okukhulayo kwama-drones esikhaleni sasemoyeni sase-US
Umthetho we-Remote Identification (Remote ID) uhlinzekela ukukhomba ama-drones endizeni kanye nendawo yesiteshi sabo sokulawula
Umthetho we-Operations Over People usebenza kubashayeli bezindiza abahamba ngaphansi kweNgxenye 107 ye-Federal Aviation Regulations
I-FAA izoqhubeka nokusebenza ngokubambisana namanye amahhovisi oMnyango Wezokuthutha kanye nababambiqhaza abavela kuwo wonke umphakathi we-drone
Imithetho yokugcina iqala ukusebenza namhlanje ukukhomba kude ama-drones nokuvumela abasebenza ngama-drones amancane ukuthi bandizele abantu nasebusuku ngaphansi kwezimo ezithile.
"Imithetho yanamuhla iyisinyathelo sokuqala esibalulekile ekuphatheni ngokuphepha nangokuvikelekile ukusetshenziswa okukhulayo kwama-drones esikhaleni sethu sasemoyeni, yize kusenomsebenzi omningi ohambweni lokuhlanganiswa okugcwele kwe-Unmanned Aircraft Systems (UAS)," kusho uNobhala Wezokuthutha waseMelika uPete Buttigieg. "UMnyango ubheke phambili ekusebenzisaneni nababambiqhaza ukuqinisekisa ukuthi izinqubomgomo zethu ze-UAS zihambisana nezinto ezintsha, ukuqinisekisa ukuphepha nokuvikeleka kwemiphakathi yethu, nokukhuthaza ukuncintisana kwezomnotho kwezwe lethu."
"IDrones ingahlinzeka ngezinzuzo ezingenamkhawulo, futhi le mithetho emisha izoqinisekisa ukuthi le misebenzi ebalulekile ingakhula ngokuphepha nangokuvikelekile," kusho FAA Umphathi uSteve Dickson. "I-FAA izoqhubeka nokusebenza ngokubambisana namanye amahhovisi oMnyango wezokuThutha nababambiqhaza abavela kuwo wonke umphakathi we-drone ukuze bathathe izinyathelo ezizwakalayo zokuhlanganisa ubuchwepheshe obuqhamukayo obusekela ngokuphepha amathuba andisiwe okusetshenziswa okuyindida kwe-drone."
Umthetho we-Remote Identification (Remote ID) uhlinzekela ukukhomba ama-drones endizeni kanye nendawo yeziteshi zawo zokulawula, ukunciphisa ubungozi bokuphazamisa ezinye izindiza noma ukubeka ingozi kubantu nasezimpahla phansi. Umthetho uhlinzeka ngemininingwane ebalulekile kozakwethu bezokuphepha kanye nabalingani bezomthetho nezinye izinhlaka ezibhekene nokuqinisekisa ukuphepha komphakathi. Kusebenza kuwo wonke ama-drones adinga ukubhaliswa kwe-FAA.
Umthetho we-Operations Over People usebenza kubashayeli bezindiza abahamba ngaphansi kweNgxenye 107 ye-Federal Aviation Regulations. Ngaphansi kwalo mthetho, ikhono lokundiza phezu kwabantu nezimoto ezihambayo lihluka kuye ngezinga lobungozi (i-PDF) idrone encane ebabhekisa kubantu abaphansi. Ngokwengeziwe, lo mthetho uvumela ukusebenza ebusuku ngaphansi kwezimo ezithile uma nje abashayeli bezindiza beqedela ukuqeqeshwa okuthile noma bedlulisa izivivinyo zolwazi.